सानेपाबाट टेकु जाँदै गरेका तामाङ बिच बाटोमै प’क्राउ ! ट्याक्सी रोकेर झोला हेर्दा देखियो यस्तो ! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र ११, २०७८ समय: २०:०२:३६
काठमाडौं, भदौ १० । प्रहरीले ललितपुरको सानेपाबाट बुद्धचित्तको दाना सहित एक युवकलाई निय’न्त्रणमा लिएको छ। प’क्रा उ पर्नेमा काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका घर भएका रोजबहादुर तामाङ छन्। तामाङले लिएर हिँडेको ९ किलो बुद्ध चित्तको दाना बरा’मद गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरकी एसएसपी किरण बज्रचार्यले बताइन ।
सानेपास्थित कालोपुलबाट ट्याक्सीमा टेकुतर्फ जाँदै गरेका २९ वर्षीय तामाङलाई महानगरीय प्रहरीप्रभाग सानेपाबाट खटिएको टोलीले प’क्रा उ गरेको हो। ललितपुरबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बा.२ ज ३६०७ नम्बरको ट्याक्सीलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपा ललितपुरबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा उक्त बुद्धचित्त फे’ला पारी तामाङलाई प’क्रा उ गरेको हो । दाना कारोबारीसँग सम्ब’न्धति गाउँ पालिकामा राजस्व बुझाएको रसिद र वन कार्यालयको ‘छुट पुर्जी’ नभएपछि प्रहरीले प’क्रा उ गरेको पनि एसएसपी बज्राचार्यले बताइन ।
यो पनि, संसदमा थपिए दुई नयाँ दल : संसदमा दुई नयाँ दल थपिएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशसँगै भदौ ९ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दलको मान्यता पाएका थिए । आयोगले उक्त जानकारी आज संघीय संसद सचिवालयलाई गराएसँगै अब नयाँ दलको अस्तित्व संसदमा पनि देखिने भएको हो ।
अब एकीकृत समाजवादी र लोसपा संसदको चौथो र छैटौं ठूलो दल हुनेछन् । एकीकृत समाजवादीलाई ३० संघीय सांसदको साथ छ भने लोसपालाई १४ सांसद। संसदमा पहिलो दल एमाले हो भने दोस्रो नेपाली कांग्रेस र तेस्रो माओवादी केन्द्र हुन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पाँचौ हो। राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा लागयतको संसदमा उपस्थिति भए पनि ‘थेस्र होल्ड’ पार गर्न नसकेका कारण उनीहरूले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छैनन् ।